လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: Buddhists outraged at Buddha's images on shoes
Buddhists outraged at Buddha's images on shoes
Labels: ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍, သတင်းများ
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား​တော်များ​၊​ ဆင်း​တု​တော်များ​အား​ ဘား​ဆိုင်များ​နှင့်​ အပန်း​ဖြေစခန်း​များ​တွင် အလှပြ အသုံး​ချကာဘာသာ​ရေး​ကိုး​ကွယ်မှုကို မ​ထောက်ဘဲ ပြုလုပ်​နေကြသည်ကိုလည်း​ ​တွေ့​မြင်ကြရမည်သာ။
ယခုအခါ ဗုဒ္ဓရုပ်ပုံများ​၊​ ကနုတ်ဒီဇိုင်း​များ​နှင့်​ အလှဆင်ကာ ဖိနပ်နှင့်​ လက်ကိုင်အိတ်များ​ကို အ​မေရိကန် အ​ခြေစိုက် Icon Shoes ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိ​နေပါတယ်။ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်း​ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာများ​မှလည်း​ ၎င်းကုမ္ပဏီအား​ ရှုတ်ချ​ဝေဖန် ​ပြောဆိုလျက်ရှိ​နေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ၏ Facebook Page တွင် သွား​ရောက် ဆန့်​ကျင်ကန့်​ကွက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီမိုက​ရေစီထွန်း​ကား​ရာ ကမ္ဘာ့​ထိပ်တန်း​နိုင်ငံကြီး​ဟာ ယခုလို ဘာသာတရား​ကို ​စော်ကား​သော ထုတ်လုပ်မှုအား​ ခွင့်​မပြုသင့်​ပါ။ ဘာသာတစ်ခု၏ ကိုး​ကွယ်ရာရုပ်ပုံများ​အား​ အလှဆင် ဒီဇိုင်း​ပြုလုပ်​နေခြင်း​ဟာ မသင့်​လျော်ပါ။
Icon Shoes Web
Icon Shoe Facebook
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Friday, August 03, 2012
Please stop producing these. These insulting the religious and can lead to religious war.
August 3, 2012 at 9:11:00 PM GMT+6:30
PEOPLE ASKING FOR RELIGIONS WAR...WWW3 IS ABOUT TO BEGIN
August 3, 2012 at 9:56:00 PM GMT+6:30
phyo paing Soe said...
I hate that bcoz it's our god. not to do like that
August 3, 2012 at 10:18:00 PM GMT+6:30
ye thit said...
Rubbish!What the hell u doing?U very low standard!
August 4, 2012 at 9:32:00 AM GMT+6:30
August 4, 2012 at 9:46:00 AM GMT+6:30
Whatacheek! The Icon Shoes Company must not make the design that religion related images.
August 4, 2012 at 3:25:00 PM GMT+6:30
မင္းတို႔မသိတော့ မင္းတို႔ပဲ ခံရမွာပါ...ငါလည္းၾကားထဲက ဒေါသမထကြ္အောင္ႀကိဳးစားရမွာလေ....။မင္းတို႔သာ ငါတို႔ ဗုဒၶဟောတဲ့တရားတြေ လေ့လာၾကည္႔ရင္ ၊ တကယ္က်င့္ႀကံၾကည္႔ရင္ စစ္မွန္တဲ့အရသာကို တြေ႔မွာပါ။နောက္တစ္ခုေျပာခ်င္တာက ဘုရားရယ္မွ မဟုတ္ပါဘူး လူအမ်ားကိုးကယြ္နေတဲ့ ကေ်ာက္တုံးတစ္တုံးကိုပဲ ျဖစ္စေ၊ မလိုသူက ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးစိတ္နဲ႔ လုပ္ရင္ ဒဏ္ျပန္ခံရတတ္တယ္ဆိုတာပါ။
August 4, 2012 at 5:59:00 PM GMT+6:30
shouldn't do like that!!!!!!!
August 5, 2012 at 9:07:00 AM GMT+6:30
so bad, stop this,
August 5, 2012 at 6:28:00 PM GMT+6:30
myanmar girl said...
အကုသိုလ္ကို မသိတော့ ငရဲကိုလည္းမေႀကာက္တဲ့။အဲဒါေႀကာင့္ မသျိခင္းက ပိုျပီးအျပစ္ရစေ
တယ္ဆိုတာအမွန္ပါဘဲ။လုံးဝလုံးဝဒီအျဖစ္ကို ကန္ ့ကက္ပြါတယ္။မျဖစ္သင့္ပါဘူး။
August 5, 2012 at 7:09:00 PM GMT+6:30
so bad!really rude...,,
August 5, 2012 at 10:52:00 PM GMT+6:30
Mother fuker Icon Shoes Co.,ltd. If you want to do icon,you fuck your mother first and makeaicon to it. Don't you know piss off company?
August 6, 2012 at 11:30:00 AM GMT+6:30
မိုက္ရိုင္းလိုက္တာကြာ...ငါတို႔ဘုရားကို လာမ်ားအောက္မေ့နေလဲမသိဘူး ငရဲဂ်ဳိးကပ္မဲ့ကောင္တြေ..ျမတ္စြာဘုရားကအမနြ္ျမတ္ဆုံးပါပဲဆိုတာသူတို႔မသိဘူးလားမသိဘူး..
August 7, 2012 at 7:23:00 PM GMT+6:30
လုပ္ဆောင္ခ်က္တိုင္းမွာ တန္ျပန္မႈရွိတယ္ မင္းတိုလိုလူမ်ိဴးတြေ ကမၻာမွာ အောက္တန္းက်နေတာ.
August 10, 2012 at 12:11:00 PM GMT+6:30
banyar thour said...
August 16, 2012 at 7:21:00 AM GMT+6:30